Time running out for Zimbabwe's Mnangagwa - The Zimbabwe Mail
HomeMainTime running out for Zimbabwe’s Mnangagwa
Time running out for Zimbabwe’s Mnangagwa
PRESSURE is mounting on the country’s political leadership to put their differences aside and hold much-needed dialogue to help end the country’s deepening economic crisis.
This comes as life for ordinary citizens is worsening by the day, with the hapless Zimbabwe dollar crashing against major global currencies – setting off a fresh wave of price increases of basic goods.
“It’s in the interests of Zanu-PF and Mnangagwa that stability be brought back by engaging the country’s main opposition and agreeing on a reform package from which the two main political leaders can speak,” Mukundu said.
Respected University of Zimbabwe political science lecturer, Eldred Masunungure, also warned that time was running out for Mnangagwa and Zanu-PF to resolve the country’s long running problems.
At the weekend, prices of basic consumer goods in the country went up sharply – on the back of the collapsing Zimbabwe dollar.
The Zim dollar was prematurely and ill-advisedly brought back last year by under-pressure Finance minister Mthuli Ncube – against the advice of economists and many people in government.
As Zimbabwe plunges deeper into turmoil, Western powers have reiterated the need for political dialogue – which they say is the only panacea to the country’s growing problems.